Tamin’ny 7 ora kosa ny fipoahana voalohany ilay antsoina hoe « annonce », izay fisintonana olona hijery. Karazany vaovao tsy fampiasa teto Madagasikara no nampiavaka ny tamin’ity, izay naharitra 45 minitra. toy ny “200 soutes”, “bombes à trois pouces”, ny “ciel”, ilay tafiakatra hatramin’ny 175 metatra miala amin’ny tany, ary ny PAC « pari rafale ». Niova ihany koa ny fametahana ny afomanga, ny isan’ny napoaka raha noharina tamin’ny taon-dasa. Samy nanao avokoa ireo kaominina manodidina an’Antananarivo toa an’i Itaosy, Ampitatafika, Andoharanofotsy, Ambohidratrimo… saingy samy nanana ny lerany.